ဒုက္ခသည်များအတွက်ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အလုပ်အကိုင်များ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ | USAHello | USAHello
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ Divide, များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှသန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု. သို့သော်ရှိသမျှသောအလုပ်အကိုင်များအရေးကြီးသောန်ဆောင်မှုများပေး.
သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုအစီအစဉ်၏အေဂျင်စီ Re-မူပြောင်းခြင်းတောင်းဆိုဖို့စတင်နိုင်ပါသည်. ထိုကဲ့သို့သောဟိုတယ်များအဖြစ်အတော်များများအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒေသခံအလုပ်ရှင်နှင့်အတူရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများဆက်ဆံရေး၏ပြန်လည်နေရာချထားရေး,. သူတို့ထဲကတချို့ကလေ့ကျင့်ရေးလည်းအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းမှုအလုပ်လုပ်.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှု, သန့်ရှင်းရေးနှင့်မည်သည့်သင်တန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမလိုအပ်ပါဘူး. ဥပမာအားဖြင့်, နေရာထိုင်ခင်းအလုပ်သမားများတစ်ဦးကြီးကြပ်ရေးမှူးသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအသစ်တစ်ခုကိုအိမ်မှာပြဇာတ်ရုံဒါမှမဟုတ်အလုပ်အပေါ်အသစ်တစ်ခုကြီးကြပ်ရေးမှူးလေ့ကျင့်ကြလိမ့်မည်.
ကို Maintenance လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုတချို့လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ပါတယ်. ရပ်ရွာကောလိပ်များသန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်အသုံးဝင်သောအဆိုပါစနစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သင်တန်းများပူဇော်. သူတို့ကအစ Landscaping, ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုအတွက်သင်တန်းများပူဇော်.
သငျသညျအိမ်မှာသားသမီးတို့အဘို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုင်စင်မလိုအပ်ပေမယ့်တစ်ဦးသင်တန်းအွန်လိုင်းသင်တစ်ဦးအလုပ်ကိုကူညီရှာဖွေစေခြင်းငှါမပြုကြ. ကြက်ခြေနီသင်အွန်လိုင်းလုပျနိုငျသားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်သင်တန်းတီထွင်ထားသည်. သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ရရှိမည်.
သင်ကူညီမရှိအဖွဲ့အစည်းကရှိပါတယ်လျှင်သင်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်စတင်နိုင်ပါသည်. အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများအခမဲ့. အကွံဉာဏျပေးနှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ဟာ CVs နှင့်စီးပွားရေး applications များကူညီပေးနေကြပါသည်. သငျသညျအလုပ်အကိုင်နှင့်ပညာရေးလေ့ကျင့်ရေး၏စင်တာများ Aousolk နိုင်ပါတယ်.